सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स आईपीओ पाँच लाख ९० हजारभन्दा बढीको हात खाली, तपाईंलाई कति कित्ता पर्यो ? - Aarthiknews
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स आईपीओ पाँच लाख ९० हजारभन्दा बढीको हात खाली, तपाईंलाई कति कित्ता पर्यो ?
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ शुक्रबार बाँडफाँट भएको छ । विहान विक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटलको कार्यालयमा भएको बाँडफाँटमा गोलाप्रथाबाट २ लाख ७२ हजार आवेदकहरुले १० कित्ताका दरले शेयर पाएका हुन ।
यो आईपीओ खरिदका लागि आवेदन दिने ५ लाख ९० हजार ५४५ आवेदकहरुको हात खाली भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन मार्फत २७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर विक्री गरेको थियो । कुल ३० लाख कित्तामभ्य १ लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषका लागि छुट्याईएको छ ।
विक्री प्रबन्धकका अनुसार यो आईपीओ खरिदका लागि ८ लाख ६६ हजार ९०५ जनाको आवेदन परेको थियो । यी मध्य ३ हजार ३६० जनाको रितपूर्वक आवेदन नभएकाले रद्ध गरिएको छ । रितपूर्वक आवेदन दिने ८ लाख ६३ हजार ५४५ जना आवेदकहरु गोलाप्रथामा सहभागी भएका थिए । आईपीओ पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
आईपीओ विक्रीका लागि असार १४ गते निवेदन दिएको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट असोज ५ गते स्वीकृति पाएको थियो । यस कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २ दशमलव ६६ रुपैयाँ र प्रतिशेयर नेटवर्थ १०६ दशमलव ३९ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिशेयर नेटवर्थको आधारमा दोस्रो बजारमा मूल्य निर्धारण हुने हुदाँ कम्पनीको पहिलो कारोबार ३०० रुपैयाँ माथिबाटै हुने देखिन्छ ।
नेको इन्स्योरेन्सले संस्थापक शेयरमा बोलपत्र पेश गर्ने आज अन्तिम दिन
गुँरास लाइफले लिलामी शेयर बाँडफाँट, नपरेको पैसा मंगलवारदेखि फिर्ता
सिटिजन लाइफ चौथो वर्षमा प्रबेश, नयाँ मस्कट समेत सार्वजनिक
मृतकको परिवारलाई १४ लाख बीमा रकम हस्तान्तरण
नागरिक लगानी कोषको ५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर विक्रीमा